Harbor Ammaan ah - Marquette Capital Bank Inc.
Marquette Capital Bank Inc. > Xarun aamin ah
Hoy ku dhex yaal Deked Ammaan ah!
Ma xiiseyneysaa inaad maal gashato dahab laakiin aad naftaada u celiso halista xatooyada ama kharashka shaqada darteed? Booqo laantayada kuugu dhow, halkaas oo aad ku maalgelin karto lacagtaada sida dahabka ah ee akoonka lacagta dahabka ama koontada maalgashiga.
Iibso oo iibiso dahab lagu sheegay giraam.
Dahabkaaga ayaa loo badali karaa lacag ahaan marka la dalbado.
Samee maalgashi aamin ah oo dahab ah.
Looma baahna in laga walwalo kharashka shaqada ama wasakhda.
Koontada Debaajiga Dahabka ah
Kaydintaada waxaa lagu qiimeeyaa gram koontadaada hubinta ee TL ama USD, oo si dhow ula socota isbeddelada qiimaha dahabka.
Ma jiraan wax lacag ah ama guddiyo ah.
Waxaad ku sameyn kartaa xawaalad xisaabaadkaaga TL 24/7, iyo xisaabaadkaaga USD inta u dhexeysa 9:00 subaxnimo iyo 6:00 galabnimo
Dahabkaagu waa 1000/1000 daahir ah, sidaa darteed looma baahna in laga walwalo wasakhda.
Xadka ugu yar ee macaamil ganacsi waa 1 garaam.
Bixinta jirka lama bixiyo.
Darajooyinka Dahabka ah ee loo maro Xisaabaadka Maalgashiga
Macaamiisheena doonaya inay maalgashadaan dahabka, adeegyada iibka iyo iibka ee garaam-ku-xiran ayaa la siiyaa.
Daahir dahab waa 995/1000.
Dahabka sidoo kale waxaa lagu iibin karaa 6.44 g, 3.22 g, iyo 1.61 g cutubyo; u dhiganta lacag dhan, badh, iyo rubuc-dahab ah siday u kala horreeyaan.
Xadka ugu yar ee macaamil ganacsi waa 0.01 garaam.
Saacadaha wax kala iibsiga waa 9:00 subaxnimo - 4:00 galabnimo iyo 6:30 galabnimo - 9:00 subaxnimo
Soo Noqoshada Wakhtiga Ah Iyo Fursadaha Lacag Baddan ee Maalgashiga Lacag Shisheeye
Eurobonds waa damaanad-qaadasho ku-meel-gaadh ah oo muddada-dheer ah oo ay soo saaraan hay'ado / shirkado ama dawlado dibedda ah oo ku jira lacag qalaad.
Bangiyadeenu waxay ku ganacsadaan Jamhuuriyadda Turkiga Undersecretariat of Treasury-ay soo saartay EUR iyo USD Eurobonds.
Macaamiisheennu waxay uga qaybqaadan karaan arrimaha Khasnadda ee Eurobonds bangigeenna.
Marka lagu daro Eurobonds oo qiimahoodu uu shaaciyay bangigeenu, waxaan awood u leenahay inaan ka ganacsano Eurobonds ay soo saaraan dalal iyo shirkado kala duwan oo lagu soo qoro lacago kala duwan markii ay codsadaan macaamiisheena.
Waxay bixisaa dulsaar kuuban xilliyeed ah oo lagu daro soo celin go'an markii la hayo illaa qaangaarka.
Lacagta raasumaalka iyo kuubannada waxaa lagu sameeyaa isla lacagta la mid ah tan Eurobond ee arrinta la xiriirta.
Aruurintooda suuqa sare awgood, maalgashaduhu wuxuu Eurobonds u beddeli karaa lacag ka hor taariikhda qaan-gaadhka ee lacagta la doonayo. Iibinta amniga suuqa labaad waxay kuxirantahay sicirka suuqa ee hada jira, sidaa darteedna waxay sababi kartaa macaash ganacsi ama khasaaro.
Bixinta tigidhada ku saabsan USD Eurobonds waxay dhacaan lixdii biloodba mar, iyo sanadkiiba hal jeer Euro Euro.
Kuwani waa la iibiyaa oo lagu iibsadaa tiro badan oo magac u yaal ah 1,000 waxayna ku xiran yihiin xaddidaadda ugu yar ee macaamil inta lagu jiro arrinta hore.
Qaddarka la maalgeliyey iyo raasumaalka ku soo laabtay bislaanshaha (qadarka magacaaban) way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadday tahay in Eurobond lagu kala iibsado qiimo sare ama qiimo dhimis xagga suuqyada ah.
Soo-celinta ma khusayso cashuurta haynta. Canshuuraha waxaa lagu fuliyaa iyadoo lagu saleynayo cadeyn, waxayna kuxirantahay sharciga sharciga maalgashadaha, iyo qaab dhismeedka iyo qadarka soo celinta. Ka dalbo mid ka mid ah laamaheena macluumaad faahfaahsan.
Macaamilada ganacsiga waxaa lagula socdaa koontadaada maalgashiga, Eurobonds waxaa lagu hayaa magaca macaamiishooda iyadoo loo marayo koontadayada bangiga ee 'Euroclear'.
Ogow Soo Noqoshadaada Mustaqbal, Ku kalsoonow kalsooni!
Miyaad jeceshahay in lacagtaadu ku hesho qiimo si cad oo aan khatar lahayn? Ku maalgeli dib-u-dhigista shuruudaha aad dooratay oo hubaal ah soo noqoshada bislaanshaha, iyadoo sicirka horay loo sii qorsheeyay iyadoo lagu saleynayo horumarka hadda jira.
Dib-u-dhigiddu waa damaanad-qaad leh oo leh soo-celin go'an sida biilasha khasnadaha ama curaarta dawladda, halkaas oo soo-saaruhu qandaraas ku bixiyo inuu dib u iibsado iyaga ka dib wakhti go'an oo ku saleysan xaalado horay loo sii dejiyey.
Diyaarso socodka lacagtaada adiga oo ka bilaabaya bisayl habeennimo si kasta oo aad rabto.
Macaamilada waxaa lagu fulin karaa wadiiqooyin kale oo loo qaybiyo (oo ay ku jiraan Bangiyada Taleefanka iyo ATM-yada) 9:00 subaxnimo ilaa 3:30 galabnimo, iyo 6:30 galabnimo ilaa 8:30 subaxnimo; iyo laanta kuugu dhow inta u dhexeysa 9:30 am iyo 4:00 pm
Xajmiga ugu yar ee macaamilku waa 1,000 TL laamaha iyo 250 TL iyada oo loo marayo marinnada qaybinta ee ka duwan.
Noqo lammaane shirkadaha waaweyn ee Turkiga leh mudnaanta Bangiga Marquette iyo Marquette Capital Bank dammaanad
Ka dib markii xisaabtaada Marquette Capital Bank Investment laga hawlgaliyo Hay'adda Diiwaangelinta Dhexe, waxaad dalban kartaa iibsiga iyo iibsiga iibsiga iyada oo loo marayo kanaalka aad doorbido Saamiyada macaamiisha waxay ku keydsan yihiin magaceeda ama nambarkiisa koontada Xarunta Diiwaanka Dhexe. Waxaad ku sameyn kartaa macaamiladaada saamiga iyada oo loo marayo Marquette Capital Bank Investment si dhakhso leh oo fudud iyadoon la xadidnayn ugu yaraan iyo heerarka komishanka ee faa'iidada leh.
Adoo maalgashi ku leh saamiyada waxaad noqoneysaa lamaane shirkada soo saartay.
La noqoshada shirkad waxay kuu keenaysaa fursado aad kula wadaagto faa'iidooyinkeeda (faa'iidooyinka) iyo kororka raasumaalka.
Isweydaarsiga ayaa caddeeya laba maalmood oo shaqo gudahood macaamil ganacsi. In kasta oo lacagta la xanibay inta lagu jiro waqtigan, waxaad ku isticmaali kartaa repo ama maalgelin maalgashi.
Saamiyada waa qalab suuq dareere dareere ah.
Soo noqoshada lama sii cayimin, waxayna kuxirantahay xaaladaha suuqa iyo waxqabadka shirkada.
Macaamillada 'KMKB' waxay ku dhacaan laba kal-fadhi oo maalinle ah, fadhi subax ah inta u dhexeysa 9:30 subaxnimo iyo 12:00 galabnimo, iyo kulan galabtii inta u dhexeysa 2:00 iyo 5:30 galabnimo
Halbeegga macaamil ganacsi ee Suuqa Saamiyada waa wax badan. 1 saamiyada badan waa 1 unug.
Saamiyada waxaa lagu keydiyaa magaca qofka iyo lambarka koontada maalgashi ee Takasbank.
Maareynta Khatarahaaga Marquette Capital Bank Ayadoo loo marayo Macaamilada TurkDEX
Qandaraasyada Mustaqbalka waa noocyo kala geddisan oo maalgashadayaashu ay ku helayaan xuquuqda ay ku iibsadaan ama ku iibiyaan wax soo saar, amni ama tilmaame maaliyadeed qiimo lagu heshiiyey, ama ay ku helaan isku mid. Qandaraasyadan waxaa laga yaabaa in looga ganacsado badbaadin, maalgashi, ama ujeeddooyin heshiisiin. Shakhsiyaadka iyo maal-gashadayaasha shirkaduhu waxay helayaan awood ay kaga fogaadaan halista oo ay u qorsheeyaan socodka lacagta caddaanka ah ee mustaqbalka si waafaqsan fikradahooda halista iyo dakhliyada laga filayo.
Xawaaladaha 'Marquette Capital Bank' ee TurkDEX waxay kuu suurta gelinaysaa inaad:
Ku samee maareyn halista wax ku ool ah iyo macaamil ganacsi ilaalin qiimo jaban macaamil ganacsi,
Ka faa'iideyso ka faa'iideysiga oo leh hoos u dhac bilow ah
Ka faa'iideyso deebaajigaaga lacagta TL maalin kasta
Ku samee macaamilo ku saabsan indexMKB index, lacagta qalaad, sinnaanta, badeecada, iyo qandaraasyada ka dhasha tamarta.
Macaamilada Ganacsi ee Dammaanadda leh Marquette Capital Bank Mudnaanta iyo Dammaanadaha
Waaran waa dammaanad siinaysa qofka haysta inuu xaq u leeyahay inuu ku iibsado ama ku iibiyo hanti asaasi u ah qiimaheeda iyo taariikhda la sii cayimay. Xaqan waxaa lagu soo furan karaa qaab lacag kaash ah ama soo gudbinta hantida.
Kadib markaad buuxiso Foomka Shaacinta Khatarta Warrantada oo ay weheliso akoon maalgashi oo laga furay Marquette Capital Bank Investment, adiguba waad samayn kartaa dammaanad iibsi oo waxaad ku iibin kartaa amarrada kanaalka aad dooratay.
Damaanad-qaadyadu waxay u furan yihiin qaybo badan oo dalab ah maalgashadayaasha suuqyada caasimadda.
Iyagoo adeegsanaya waaran, maalgashadayaashu waxay ku sameyn karaan macaamil ganacsi ilaalin ah meesha ay hadda joogaan, maalgashadayaasha leh halista sare waxay ka faa'iideysan karaan ka faa'iideysiga.
Kala-duwanaanta faylalka ayaa sidoo kale u muuqata qayb kale oo codsi ah.
Damaanad-qaadka oo ka kooban dhowr hanti hoosaad oo kala geddisan ayaa u fududeynaya labada dhinac ee suuqa inay is-taagaan oo ay siiyaan maalgashadayaasha faa'iidooyin ku saleysan guddiga.
Waraaqaha loo baahan yahay
Foomka Shaacin Halista
Xog-hayaha Khasnadda ee Wasaaradda Ra'iisul-wasaaraha ee TR wuxuu ka iibiyaa kuwa tafaariiqda maalgashadayaasha Bonds Gold iyo Shahaadooyinka Ijaarka Dahabka iyadoo ujeedadu tahay kala duwanaanta qalabka amaahda iyo saldhigga maalgashadayaasha.
Maalgashadayaashu waxay ku dalban karaan arrimaha dahab dahab ah oo ah 22K iyo 24K. Dahabka waxaa lagu aqbalaa heerka nadiifnimadiisa iyadoo aan laga gaabin. Jadwalka jadwalka iyo soo saarista qodobka waxaa ku dhawaaqay TR Prime Minister Undersecretary of Treasury.
Bixinta ka dib, maalgashadayaashu waxay iibin karaan dammaanadaha Bangigeena illaa taariikhda qaan-gaadhka oo waxay ku heli karaan maamulaha iyo dulsaarka dulsaarka / heshiiska kirada ee Turkish Lira. Haddii maalgashadayaashu ay iibiyaan dammaanadaha inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreeya (oo ay ku jiraan maalinta 90aad) ka dib taariikhda arrinta, qiimaha dib u iibsashada waxaa lagu dhawaaqay 1.50% dhimis. Muddadan ka dib qiimo-dhimis lama dalbanayo qiimaha dib-u-soo-celinta. Haddii dammaanadaha la iibiyo ka hor taariikhda qaan-gaadhka, qiimaha dib-u-celinta waxaa lagu dhawaaqi doonaa iyadoo loo eegayo qiimaha suuqa ee dahabka. Dammaanadaha ayaa sidoo kale loo wareejin karaa maalgashade kale oo tafaariiq ah ka hor bislaanshaha. Taariikhda qaan-gaadhka, lacag-bixinnada ugu dambeeya ee ku-meel-gaadhka ah / kirada ah ee lagu muujiyey qiimaha dahabka ayaa lagu bixin doonaa Lira-da Turkiga. Lacagta kuubanka / heshiiska kirada ee sannadlaha ah waxaa lagu sameeyaa Lira Turki taas oo lagu soo qoro qiimaha dahabka taariikhaha bixinta tigidhada.
Markay bislaadaan, maalgashadayaashu waxay codsan karaan lacagta ugu weyn ee madax furashadooda dahabka ama 1 kiilo garaam oo baarka dahabka ah iyo Qadaadiicyada Dahabka ee Jamhuuriyadda Daabacan oo ay daabacday Mint State Turkish ama giraam dahab ah oo ku jirta koontoodii dhigaalka. Kahor taariikhda madax furashada Maalgashadayaashu waa inay ku wargeliyaan Bangigeenna waxa ay doorbidayaan dalabkooda lacag bixinta ee ugu sarreeya dahabka inta lagu jiro "Muddada Baahida Dahabka Jirka ah". Maalgashadayaasha aan soo gudbin dalabkooda dahabka ah ee jireed muddadan, lacagaha ugu badan waxaa loo sameeyaa sida garaam oo dahab ah oo lagu shubo xisaabaadka dhigaalka dahabka.
Ceymiska la soo saaray oo laga iibiyey maalgashadayaasha waxaa elektaroonig ahaan loogu hayaa gudaha Keydadka Hantidhawrka Dhexe ee Turkiga.
Golaha Wasiiradu waxay go'aamiyeen heerka canshuurta laga reebay inuu noqdo 0% Shahaadada Bond Gold / Gold Lease Certificate.
U dir Su'aalaha: Info@MarquetteCapitalBank.com